हरेक मान्छेभित्र एउटा किताब हुन्छ : एउटा जीवनको ब्याख्या - khull Postहरेक मान्छेभित्र एउटा किताब हुन्छ : एउटा जीवनको ब्याख्या - khull Post
पुरुषोत्तम ढकाल २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०७:३४ 190 Views
लेवनानको बेरुइट पुस्तकालयको द्धारमा नै लेखिएको छ हरेक मान्छे भित्र एउटा किताब लुकेको हुन्छ, यस बिम्बलाई मानविय अनुभवको परिवेशमा बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
नोवल पुरस्कार बिजेता अमेरिकी लेखक टोनी मोरिसनले पनि चित्तोकर्षक रुपमा मानविय जीवन मानवको आन्तरिक र बाह्य अनुभवहरुको पुस्तकरुपी संगालो नै हो भनी भनिदिएका छन् ।
जीवनलाई पुस्तकका रुपमा बिभिन्न कवी, लेखक र आख्यानकारहरुले हजारौं वर्ष अघिबाट ब्याख्या गरेकै छन् । हामीभित्रको पुस्तकको सन्दर्भमा आज लेख्दै छु है ।
किताबका हरेक पानाहरुको चेतना झैं जीवनका हरेक अनुभवहरुमा एउटा चेतना लुकेको हुन्छ, हैन र ?
उर्दु कवी शकिल बदुयनीले पनि यसै सन्दर्भमा बडो मिठो रुपमा मैले जीवनको कितावबाट धेरै नयाँ कुराहरु सिक्न पाँए तर ति कितावहरु कुनै दराजमा भनें राखिएका थिएनन भनी लेखेका छन् । जीवनका हरेक किताब र पनाहरुका अनुभवले हामीलाई थप जीवनले भरेर जान्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
फैन्च लेखक जीन परु साट्रेले किताबमा लेखिएका कुरा हाम्रो भित्र भएका कुराहरुको अक्षरस रुपान्तरण मात्र हो भनेंका छन् । हामी पनि हरेक दिन र अनुभवहरुको संगालोमा आफ्नो भागको पुस्तकका पानाहरु लेख्दै अनि भर्दै जाँदै त छौं नि, हैन र ?
आफ्नो जीवनको पुस्तकमा मिठा मिठा अनुभवहरु भर्दै जाँउ, हरेक भावनाहरु यस किताबका अक्षरहरु हुन र हरेक अनुभवहरु यस पुस्तकका पानाहरु ।
पढदै जाँउ अनि लेख्दै जाँउ ।